ယခုအခါ အာဖဂန်ရှိ ခရိုင်ပေါင်း တစ်ဝက်ကျော်ကို တာလီဘန်များ ထိန်းချုပ်ထားပြီဖြစ်ဟု အမေရိကန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပြော - Xinhua News Agency
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း Laghman ပြည်နယ်တွင် တာလီဘန်များအား နှိမ်နင်းနေသည့် အာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၂ ရက်ကတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဝါရှင်တန် ၊ ဇူလိုင် ၂၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အာဖဂန်တာလီဘန်စစ်သွေးကြွများက ယခုအခါ စစ်မက်ဖြစ်ပွားနေသည့် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းရှိ ခရိုင်အရေအတွက် တစ်ဝက်ကျော်ဖြစ်သည့် ခရိုင်ပေါင်း ၄၁၉ ခုကို သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပြီဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံထိပ်တန်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦးက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပြောကြားလိုက်သည်။“ တာလီဘန်တွေဟာ မဟာဗျူဟာကျကျ အရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ချီတက်လာနေပါတယ်” ဟု အမေရိကန်ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်များကော်မတီဥက္ကဌဗိုလ်ချုပ်ကြီး မက်ခ်မိုက်လီ (Mark Milley)က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
“ တာလီဘန်တွေ အကုန်လုံးထိန်းချုပ်သွားနိုင်မလား ဒါမှမဟုတ် အခြားမြင်ကွင်းတွေ အရေအတွက် ဘယ်လောက် ဖြစ်နိုင်မလဲ ၊ ပွဲပြီးသွားပြီလို့ ရေးလို့ရမယ်လို့တော့ ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
စစ်သွေးကြွများအနေဖြင့် အာဖဂန်နိုင်ငံ၏ ပြည်နယ်မြို့တော်ကြီး ၃၄ ခုအနက် မည်သည့်မြို့ကိုမျှ သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခြင်းမရှိသေးချိန်တွင် ၎င်းတို့၏ ထက်ဝက်ကျော်ကို သူတို့က ဖိအားပေးလျက်ရှိကြောင်း မိုက်လီ ကဆိုသည်။
အာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ကဘူးလ်မြို့တော်အပါအဝင် အဓိကမြို့ကြီးများကို ကာကွယ်ရန် ၎င်းတို့၏ အနေအထားကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆုတ်ကိုင်ထားဆဲဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှ အမေရိကန်ဦးဆောင်သော တပ်ဖွဲ့များ စတင်ရုပ်သိမ်းသွားသည့် မေလအစောပိုင်းကတည်းက အာဖဂန်ပြည်နယ်အများအပြားတွင် တာလီဘန် နှင့် အာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအကြား တိုက်ပွဲများအပြင်းအထန် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။
အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်က အာဖဂန်ရှိ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များရုပ်သိမ်းရေး မူလသတ်မှတ်ရက်ဖြစ်သည့် စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်ထက် ရှေ့တိုး၍ အချိန်ဆောလျင်စွာ ဩဂုတ် ၁ ရက်တွင် တရားဝင်အဆုံးသတ်ရန် ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်ကုန်ပိုင်းတွင် တပ်ဖွဲ့ဝင်ရုပ်သိမ်းရေး အပြီးသတ်ဆောင်ရွက်မှုကို ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လုပ်ဆောင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်စစ်ဌာနချုပ်က ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သော ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုအတွင်း အာဖဂန်စစ်မြေပြင်တွင် အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ ၂၀,၀၀၀ ခန့်နှင့်အတူ ၂,၄၀၀ ကျော် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်း ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ ထို့ပြင် ခန့်မှန်းခြေ အာဖဂန်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၆၆,၀၀၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး ပြည်သူပေါင်း ၂.၇ သန်း ကျော် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
WASHINGTON, July 21 (Xinhua) — Afghan Taliban militants now control about half of the war-torn country’s 419 district centers,atop U.S. general said on Wednesday.
“Strategic momentum appears to be sort of with the Taliban,” General Mark Milley, chairman of the U.S. Joint Chiefs of Staff, toldapress conference.
“There’sapossibility ofacomplete Taliban takeover, or the possibility of any number of other scenarios,” Milley said. “I don’t think the end game is yet written.”
While the militants have yet to capture any of the country’s 34 provincial capitals, they are pressuring about half of them, said Milley.Afghan security forces are consolidating their positions to protect those major urban centers including Kabul, he said.
U.S. President Joe Biden has setaformal end to the U.S. military mission in Afghanistan for Aug. 31, days ahead of his original Sept. 11 deadline.U.S. Central Command said last week over 95 percent of the withdrawal had been completed.
More than 2,400 U.S. troops have been killed in Afghanistan over the past two decades, with 20,000 wounded, according to the Pentagon. Estimates show that over 66,000 Afghan troops have been killed, and over 2.7 million people have had to leave their homes.
Photo- Afghan security force members take part inamilitary operation against Taliban militants in Alishing district of Laghman province, eastern Afghanistan, on July 12, 2021. (Photo by Saifurahman Safi/Xinhua)